Israel ichiwedzera kukiya kusvika Chishanu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Israel ichiwedzera kukiya kusvika Chishanu
avhiyesheni • Hurumende Nhau • Health News • Israel Breaking News • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Israel inovhara Ben Gurion Airport, inomisa ndege dzese dzevanofamba
Israels kabineti yasarudza nhasi kuwedzera kukiya kusvika Chishanu mangwanani. Israel iri kusangana yakakwira COVID-19 hutachiona huwandu.
Kuwedzeredzwa kunouya sekufungidzirwa kweIsrael kuti macoronavirus kesi uye kufa kwaizodzikira pakati paNdira, fungidziro iyo isina kuzopedzisira yaitika, sekureva Reuters. Vakuru veIsrael vanonongedzera kune mamwe anopararira ekune dzimwe nyika marudzi uye kusateedzera mukati menyika kune inoenderera yakakwira COVID-19 nhamba.
Vakuru veKabineti vanonzi vakapenga pamusoro pekuti vangatore nguva yakareba sei kuvhara, neNetanyahu nevakuru veHurumende veHurumende vachipokana kweinenge vhiki refu, ukuwo Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, Benny Gantz vachikurudzira kuti ipere pasati papfuura China, sekureva kweThe Times yeIsrael.
Israeri, nyika 9,2 miriyoni yaive ne643,435 COVID-19 kesi. 4796 vanhu vakafa. Izvi zvinoshandura kuita 69,957 pamamiriyoni evagari vemo uye inoisa Israeri pachinzvimbo 11 pasi.